Wararkii ugu danbeeyay qaraxii Hotel Maka Al-Mukarama oo dad caan ah ku dhinteen |
Wararkii ugu danbeeyay qaraxii Hotel Maka Al-Mukarama oo dad caan ah ku dhinteen
Faah faahin dheeri ah ayaa kasoo baxaya Qaraxii caawa ka dhacay iridka hore ee Hotel Maka Al-Mukarama, iyadoo qof doonayay inuu gudaha Hotelka isku qarxiyo ciidamada amaanka qabteen, balse qaraxa khasaaraha geystay uu ka dhacay bannaanka Hotelka, kaasoo ay ku dhinteen Afar qof.
Dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray Diblumaasi Somali British ah oo horay Dowladdii KMG safiir ugu magacowday dalka Ingiriiska, laguna magacaabo Cabdulqaadir Aadan Cali “Dhuuboow”lana dhashay Wasiiraddii caafimaadka ee Hotel Shaamo lagu qarxiyay, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay Xildhibaan Cabdi Warsame Sooyaan.
Guud ahaan dadka dhintay ayaa la sheegayaa iney yihiin Afar, 15 kalena wey ku dhaawacmeen, iyadoo khasaaraha laga yaabo inuu intaas kasii kordho maadaama xili habeen ah qaraxu uu dhacay.
Saraakiisha amaanka ayaa sheegay iney gacanta ku dhigeen qof doonayay in gudaha Hotelka isku qarxiyo kadib markii ay wax ka qaldameen, Computer uu watayna qarax yar sameeyay, kaasoo inta uusan qarxin gacanta lagu dhigay.
Waxaa la isla xiriirinayaa qaraxa gudaha Hotelka ka dhacay ee ka dhashay Computerka iyo kan bannaanka Hotelka ka dhacay oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay.
Xiliga qaraxu dhacayay ayaa waxay wadada Maka Al-Mukarama aheyd mid aad u mashquul badneyd, waxayna dadka ka dukaameysanayeen goobaha ganacsi iyo carwooyinka ku yaal wadada dheer ee Maka Al-mukarama.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa weerarkan ka hadlay isagoo ku eedeeyay kooxaha Shabaab oo doonaya iney dhibaateeyaan shacabka, sidoo kale wuxuu xaqiijiyay geerida Mr. Dhooboow oo Dowladdii KMG u magacowday wakiilka Soomaaliya ee UK.